नेप्से परिसूचक २.४८ % ले वृद्धि, ९ अर्ब ४४ करोडभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री
भदौ २७, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढेको छ ।
यो दिन अघिल्लो कारोबार दिन बिहीवारको तुलनामा ७१ दशमलव ४३ अंक बढेर २ हजार ९४७ दशमलव ४२ विन्दुमा पुगेको हो । २ हजार ८८७ दशमलव ५० विन्दुदेखि खुला भएको आइतवारको बजार २ हजार ८८७ दशमलव ४७ विन्दुसम्म झरेको थियो । यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स २ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात १३ दशमलव शून्य ३ अंकले बढेर ५४८ दशमलव २९ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन २३१ ओटा कम्पनीको रू. ९ अर्ब ४४ करोड ३५ हजार बराबरको १ करोड ७१ लाख ३३३ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । यो कारोबार ९६ हजार ५९१ पटकको व्यापारमा भएको हो ।
सर्वाधिक रकमको कारोबारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले सर्वाधिक हिस्सा ओगटेको छ । उक्त कम्पनीको रू. ७३ करोड ७७ लाख ८ हजार बराबरको १ लाख ९ हजार २४० कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको अरुणभ्याली हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य यो दिन ४ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ३१ दशमलव ५० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ७३५ दशमलव १० कायम भएको छ ।
आइतवार जलविद्युत समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचकहरु मध्य म्युचुअल फण्डको परिसूचक शून्य दशमलव २९ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी समूहको बढेको छ । जलविद्युत् समूहको सर्वाधिक ६ दशमलव ३७ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।
त्यस्तै विकास बैंकको ५ दशमलव १३ प्रतिशत, वित्तको ४ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको ४ दशमलव ५१ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको ३ दशमलव २७ प्रतिशत, लगानीको २ दशमलव ३१ प्रतिशत, होटल्स तथा पर्यटनको २ दशमलव २३ प्रतिशत, लघुवित्तको २ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, जीवन बीमाको १ दशमलव ८४ प्रतिशत, बैंकिङ्ग र व्यापारिकको एकै अनुपात १ दशमलव २५ प्रतिशत र अन्यको शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो ।
उच्च अंकले बजार बढेको दिन १५ ओटा धितोपत्रहरुको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । यस दिन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापकतर्फ र सर्वसाधारणतर्फको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । यी सँगै नेशनल हाइड्रोपावर, फष्र्ट माइक्रोफाइनान्स, अपि पावर, अरुण काबेली पावर, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, पाँचथर पावर, लिबर्टी ईनजी र सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य पनि १० प्रतिशतलेनै बढेको छ ।
त्यस्तै हिमालयन पावर पार्टनरको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत, सिनर्जी पावर डेभलपमेण्टको ९ दशमलव ७९ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावरको ९ दशमलव ६२ प्रतिशत, शिवश्री हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ६० प्रतिशत र नेपाल हाइड्रो डेभलोपर्सको शेयरमूल्य ९ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस दिन सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड- १ को इकाईमूल्य सर्वाधिक ३ दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिइकाई रू. शून्य दशमलव ३९ ले घटेर यस फण्डको अन्तिम इकाईमूल्य रू. १० दशमलव ५१ कायम भएको छ ।